Afghanistana, tsy afa-bela amin’ny ady na dia ny zaza vao teraka any amin’ny hôpitaly aza · Global Voices teny Malagasy
Asa fampihorohoroana tao aminà toerana iray fiterahana ao Kaboul, Afghanistàna
Voadika ny 19 Mey 2020 12:45 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, عربي, Ελληνικά, русский, Français, 日本語, English
Ireo miaramila afghana miambina ilay toerana nisian'ny fanafihana ireo reny sy ny zanany vao teraka tao Kaboul, ao Afghanistàna, ny 12 May. Sary an'i Ezzatullah Mehrdad, nahazoana alàlana.
[Mankany amin'ny pejy amin'ny fiteny anglisy ny rohy raha tsy misy fanamarihana manokana]
Ny marainan'ny 12 May 2020, teo am-pifohazana ireo Afghana no nahafantatra ny vaovao hoe nisy asa fanafihana fampihorohoroana roa nitranga. Tsaroan'izy ireo tamin'izany fa tafakatra aminà haavonà habibiana iray vaovao ny ady misy amin'izao fotoana izao. Tamin'ity indray mitoraka ity, tsy afa-bela na ny zaza menavava sy ny renin'izy ireny aza.
Toerana iray fiterahana ao Kaboul, kinendrin'ny fanafihana
Tamin'io andro io, milisy telo no nanao amboletra niditra ny toerana iray fampiterahana tantanin'ny ONG Médecins Sans Frontières ao amin'ny vohitr'i Barchi, andrefan'i Kaboul. Afaka niresaka taminà vavolombelona maro nahita ny zavanisy ny Global Voices. Isan'ireny, ny fianakavian'i Soraya Ibrahimi, vehivavy 31 taona, bevohoka nentina tao amin'ilay klinika ny 11 May tamin'ny 11 ora alina. Tamin'ny iray ora maraina i Soraya no niteraka ny zanany. Raha niandry ny fiverenany ireo fianakaviany, nisy mpiray vodirindrina tamin-dry zareo nampilaza fa hoe nisy nanafika ilay klinika.
Nihazakazaka ny fianakaviany nankany amin'ny klinika izay nidiran'ireo milisy sy efa nanombohan-dry zareo namono zazakely, izay ny sasany tsy mbola nahita akory ny reniny. Mba tsy maty ny zanany, fa i Soraya no maty novonoina.
« Tsy nanana fitaovam-piadiana akory ireo mpiambina ilay klinika ka tsy nahasarotra ny fidiran'ireo milisy », hoy ny nambaran'i Habibullah Amiry, vavolombelona nahita maso, tamin'ny Global Voices. « 30 minitra taty aoriana vao tonga teo an-toerana ny polisy. Nandritra ny 30 minitra, notohizan'izy ireo ny famonoana, tsy nisy nanohintohina. »
Satria betsaka amin'ireo mpitsabo sy infirmiera no nahafantatra ny fisian'ny efitrano tsara aro ao amin'ilay klinika, dia afaka nidify tao ry zareo. Fa ireo zaza vao teraka, ireo vehivavy bevohoka ary ireo hafa marary no tsy nisy afaka niaro tena tamin'ny bala. Vehivavy telo sy zazakely iray no voatifitra teo an-dalantsara. Vehivavy fito no voatifitra teo am-pandriany. Vehivavy roa no voatifitra teo amin'ny gorodon'ny efitrano fandidiana. Reny iray nitrotro an-janany no maty novonoina ary infirmiera iray nodorana, hoy i [ar] Anisa Shaheed, mpanao gazety.
« Nahoana no tsy vitanay ny nitondra ireo reny rehetra ireo tany anatin'ilay efitrano tsara aro ? » hoy ny nosoratan'i Wahida Mukhtar, mpiasa iray ao amin'ilay klinika, raha nanoratra tao amin'ny Facebook, « Hamono ahy io alahelo io ». Vehivavy iray nentina tany anatin'ilay efitra tsara aro no teraka tao, raha ireo milisy kosa namono olona tao ivelany.
Nandritra ny ora efatra, nifampitifitra tamin'ny mpitandro filaminana afghana ireo milisy, nahatonga ireo olona an-jatony tavela teny ivelan'ilay klinika hiahiahy fatratra momba izay nanjo ny havany voafandrika tao anatiny. Nolazain'ny ministeran'ny fahasalamana afghana fa vehivavy sy zaza menavava niisa 24 no maty nandritra ilay fanafihana.
Nanamparan-dry zareo ny fony hatramin'ny faty, tao anatin'ity firohotan'ny herisetra ity
Tany an-toerana hafa, faritanin'i Nangarhar, any atsinanan'ny firenena, nisy iray mpanao vy very ny ainy niaraka nizotra taminà olona niisa 500 nanatrika ny fandevenana an'i Sheikh Akram, lehiben'ny polisy tao an-toerana. Nangatahan'ny imam (mpitari-pivavahana) ny olona mba hanao valala manjohy ary vao avy nambarany indrindra ny fiantobohan'ny vavaka no naparitaky ny fipoahana ireo olona marobe, nahafatesana olona 30 teo ho eo ary naharatràna 70 hafa.
« Tsy lavitra ilay fipoahana no nisy ny vatana mangatsiakan'i Sheikh Akram », hoy i Naeem Jan Naeem, vavolombelona, tamin'ny New York Times. “Voakitika ny fatiny taorian'ny fahafatesany.”
Voakiana ny fifanarahana nifanaovan'i Etazonia sy ireo Talibàna
Ireo fanafihana ireo dia nitranga tao anatin'ny dingana marefo fikatsahana fandriampahalemana mahatafiditra an'i Etazonia sy ny Talibàna izay, tamin'ny 29 Febroary lasa teo, dia nanasonia fifanarahana iray, nantenaina hampitsahatra ny ady afaka fotoana fohy. Io fifanarahana io dia tokony nampihena ny herisetra tao amin'ny firenena sy hanome vàhana ireo fifanarahana ifanaovan'ny governemanta sy ry zareo Talibàna.
Kanefa, nidona tamin'ny tolàna ilay fifanarahana, dia ny resaka famotsorana ireo Talibàna voafonja miisa 5.000. Nolavin'ny governemanta afghana ny hanafaka gadra marobe tahaka izany ka tamin'ny farany, vitsy kely ihany no navotsotra.
Na teo aza ny antso iraisampirenena hisian'ny fampitsaharana poabasy noho ny maha-olona, nitohy nanatontosa ny ady ihany ry zareo Talibàna tany amin'ny faritra ambanivohitra. Nampangain'ny governemanta afghana ry zareo Talibàna ho tomponandraikitra tamin'ireny fanafihana natao tamina hôpitaly tao Kaboul ireny, sy ilay fanafihana nanaovana vy very ny aina tao Nangarhar. Nanomboka teo ny filoha Ashraf Ghani dia nanome baiko ny tafika afghana hivoaka tamin'ny « fiarovantena mavitrika » nataony teo aloha ka hiditra amin'ny fanafihana ireo talibàna.
Ho valiny, namaly tao anaty fanambaràna iray ry zareo Talibàna hoe nataon'ny governemanta izay tsy hampahomby ireo fifanakalozankevitra madio hisian'ny fandriampahalemana, ka nametraka ireo fanafihana hôpitaly ho eo an-tsorony. Nilaza ny fahavononany hiady amin'ny governemanta ry zareo Talibàna.
Fanafihana miverimberina manjo ny Hazara
Toa ny fanontanianaho an-tena napetrak'i Deborah Lyons, tomponandraikitry ny iraky ny Firenena Mikambana ao Afghanistàna:
Fa iza no manafika zaza vao teraka sy reny avy niteraka ? Iza no nanao izany ? Ny tsy manantsiny indrindra amin'izay tsy manantsiny, ny zazakely ! Nahoana ? Tsy manana mpiaro eo anivon'ny maha-olona raha ny habibiana.
Ny fanjakàna islamika (FI) no nitonona ho tomponantoka tamin'ilay fanafihana nanaovana vy very ny aina tao Nangarhar. Saingy tsy nisy na vondrona iray aza nilaza ho tomponantoka tamin'ireo tifitra natao ireo reny sy zaza vao teraka tao amin'ny vohitr'i Barchi ao Kaboul. Faritra iray izay ny vondrompiarahamonina shiita Hazara no tena betsaka monina ao, lasibatr'ireo fanafihana nankalazaina be tanaty fampahalalambaovao efa hatramin'ny 2015, andro nanambaràn'ny FI hoe azy ny andraikitra tamin'ilay fanafihana.
Isan'ny hita tanatin'ireo fanafihana tany aloha natao tamin'ilay vondrompiarahamonina ny fanafihana fanaovana vy very ny aina amin'ny alàlan'ny baomba tany anaty maoske iray, toeram-pianarana iray, toerana iray fanaovana fanatanjahantena ary efitrano iray fampakarambady. Isaky ny misy ny fanafihana anaovana vy very ny aina dia ahafatesana sivily marobe izay nifamory mba hankalaza, hitomany (ny maty) na hianatra.
« Tsy vitan'ny hoe mangirifiry ilay zavanisy, fa tena zavadoza nampivarahontsana », hoy i Amiry, vehivavy iray mponina ao an-toerana tamin'ny Global Voices « Atao vono moka any amin'ireo toerana fibeazana ny tanoranay ; vonoina izahay any anaty efitrano fampakarambady, lasa tsy toerana azo antoka intsony ireo maoske ary tamin'ity indray mitoraka ity, toerana fitsaboana no notafihana. Izahay no tena atao hoe olona tsy misy mpiahy / tsy manan-ko antenaina. Tsy tànana hisarangotra ary tsy tongotra hitsipaka. »